Global Voices teny Malagasy » Singapore: Raha Isika No Nandefa Ny Balafomanga… · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Avrily 2012 10:12 GMT 1	 · Mpanoratra Kirsten Han Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika
Rehefa nandamoka ny nandefasan'i Korea Avaratra ny balafomanga , nalaza ny fampiasana tao amin'ny Twitter ny tenifototra hoe: #ifSingaporelaunchedarocket  [raha i Singapore no nandefa ny balafomanga].
@mrbrown : #ifSingaporelaunchedarocket, tokony omena anarana ny balafomanga, rehefa avy nomena anarana ireo fanandramana nandaniana an-tapitrasany-dolara. Ny Balafomangan'i Singapore.
@jeffcheong : #ifSingaporelaunchedarocket & tsy nahomby, ho fantatra hoe fanarahamaso an'habakabaka. Nahomby foana ny fandefasana balafomba nataon'i Singapore. Toy ny hoe nahoana ny ‘rano mihandrona’  no nampiasaina hanakonana ‘tondra-drano”.
@contrabandkarma : #ifSingaporelaunchedarocket nandamòka, Lui Tuck Yew nilaza fa tsy voasakana ny tsy fetezana (panina).
@dingneng : #ifSingaporelaunchedarocket, teo akaikin'ny GE angamba izany, ka mety hireharehan'ny mpanao politika.
@kixes : #ifSingaporelaunchedarocket nandamòka, mety ho izao ny lohateny tao amin'ny @STcom , “Nilaza ny Minisitry ny Fiarovana fa ezaka tsara voalohany ny fandefasana balafomanga tao Singapore”.
@MrJohnHoHoHo : #ifSingaporelaunchedarocket Yam Ah Mee no ho tokana manisa mianòtra.
@visakanv : #ifSingaporelaunchedarocket mety hanana hira masisosiso [fromazy] miaraka amin'ny fihetsiky ny tanana isika, toy ny YOG's Oh Yeah x3
@weizhu : #ifSingaporelaunchedarocket tokony nametrahana vehivavy hanafosafo ny kalim-pandefasana aloha
@axixe : #ifSingaporelaunchedarocket mety manontany ny olona raha misy tarehimarika famantarana ny balafomanga..Noho ny fambara tsara lazainy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/16/32111/
 ‘rano mihandrona’: https://globalvoicesonline.org/2011/12/30/singapore-is-it-flooding-or-just-ponding/